ကိုရိုနာဗိုငျးရပျဈအန်တရာယျအတှကျ G7 အဖှဲ့ဝငျနိုငျငံမြားရဲ့ကွိုတငျပွငျဆငျမှုမြား။ – SoShwe
Home/Banking & Finance/ကိုရိုနာဗိုငျးရပျဈအန်တရာယျအတှကျ G7 အဖှဲ့ဝငျနိုငျငံမြားရဲ့ကွိုတငျပွငျဆငျမှုမြား။
ကိုရိုနာဗိုငျးရပျဈအန်တရာယျအတှကျ G7 အဖှဲ့ဝငျနိုငျငံမြားရဲ့ကွိုတငျပွငျဆငျမှုမြား။
So Shwe March 25, 2020	Banking & Finance Leaveacomment
ကိုရိုနာဗိုငျးရပျဈ ကူးစကျမှုနှုနျးက ကမ်ဘာ့စီးပှားရေးအပျေါ သိသိသာသာရိုကျခတျလာခဲ့ပွီး အဆိုးရှားဆုံး ခံစားရသညျ့နိုငျငံက တရုတျနိုငျငံဖွဈသျောလညျး လကျရှိအခြိနျ၌ နိုငျငံပေါငျးရာနဲ့ခြီ ထိခိုကျလာခဲ့ပွီဖွဈပါတယျ။ ထိုကဲ့သို့ထိခိုကျသညျ့နိုငျငံမြား၌ ကနဒေါ၊ ပွငျသဈ၊ ဂြာမနီ၊ အီတလီ၊ ဂပြနျ၊ ဗွိတိနျနဲ့ အမရေိကနျနိုငျငံတို့လညျး ပါဝငျနပွေီဖွဈပါတယျ။
ဘဏျလုပျငနျးဆနျးစဈလလေ့ာသူမြားရဲ့အဆိုအရ နိုငျငံအသီးသီးရှိဘဏျမြားသညျ ယခငျနဲ့မတူညီသညျ့ အခွအေနအေမြားစုနဲ့ ရငျဆိုငျနရေပွီး ရှယျယာမြားမှတဈဆငျ့ အမွတျအစှနျး (၁၀) ရာခိုငျနှုနျးကြျောသာ ရရှိလကျြရှိနပေါတယျ။ ကနဒေါနိုငျငံရှိ ဘဏျမြား၌ အမွတျငှေ (၁၃.၀၅) ရာခိုငျနှုနျး၊ အမရေိကနျနိုငျငံ၌ အမွတျငှေ (၁၀.၉၉) ရာခိုငျနှုနျးသာရရှိနပွေီး ဂြာမနီနဲ့ဂပြနျနိုငျငံတို့မှ ဘဏျမြားမှာမူ G7 နိုငျငံမြားအနကျ အနညျးဆုံးအဖွဈ အမွတျငှေ (၂.၁၃) ရာခိုငျနှုနျး၊ (၃.၉၂) ရာခိုငျနှုနျးစီသာရရှိထားကွောငျး သိရှိရပါတယျ။
ဂြာမနီ၊ အီတလီနဲ့ ပွငျသဈနိုငျငံတို့မှ ဘဏျမြားသညျ ခြေးငှနေဲ့အပျငှအေခြိုးအမြားဆုံးရှိပွီး လာမယျ့လပျိုငျးအတှငျး ဘဏျမြားအနဖွေငျ့ အားလပျရကျရရှိနသေညျ့ Customer မြားကို အပေါငျစာခြုပျမြားနဲ့ အခွားခြေးငှမြေားပွနျလညျပေးဆပျရနျအတှကျ ဖိအားပေးခံရနိုငျပါတယျ။ အဆိုပါနိုငျငံမြားမှ ဘဏျတဈခုခငျြးစီရဲ့ ခြေးငှနေဲ့အပျငှအေခြိုးနှုနျးက (၂၀၁၈) ခုနှဈ၌ (၁၁၀.၅၆) ရာခိုငျနှုနျး၊ (၁၀၅.၇၆) ရာခိုငျနှုနျးနဲ့ (၁၀၄.၁၁) ရာခိုငျနှုနျးအထိရှိခဲ့ပါတယျ။ အီတလီနိုငျငံမှ အကွီးမားဆုံးဘဏျ (၂) ခုရဲ့ ခြေးငှနေဲ့အပျငှအေခြိုးနှုနျးက (၁၂၀) ရာခိုငျနှုနျးနဲ့အထကျရှိပွီး ပွငျသဈနိုငျငံမှ အကွီးမားဆုံးဘဏျ (၂) ခုရဲ့ ခြေးငှနေဲ့အပျငှအေခြိုးနှုနျးက (၁၁၀) ရာခိုငျနှုနျးနဲ့အထကျရှိကွောငျးလညျးသိရှိရပါတယျ။
ဂြာမနီနိုငျငံရှိ အကွီးမားဆုံးဘဏျ (၃) ခုရဲ့ ခြေးငှနေဲ့အပျငှအေခြိုးနှုနျးမှာမူ (၁၀၀) ရာခိုငျနှုနျးကို မကြျောလှနျဘဲ ထိုကဲ့သို့ဖွဈရသညျ့အကွောငျးရငျးမှာလညျး နိုငျငံအတှငျးရှိ ကြေးလကျနဲ့စိုကျပြိုးရေးဖှံ့ဖွိုးတိုးတကျမှုဘဏျဖွဈသညျ့ Landwirtschaftlich ကဲ့သို့သော အသေးစားဘဏျမြား၌ ခြေးငှနေဲ့အပျငှအေခြိုးနှုနျးက မွငျ့မားနခွေငျးကွောငျ့ဖွဈပါတယျ။
Microeconomic အဆငျ့၌ ကမ်ဘာ့ဘဏျနဲ့ဗဟိုဘဏျမြားအနဖွေငျ့ ကမ်ဘာ့စီးပှားရေးကို ထောကျပံ့ရနျ အစီအစဉျမြားဆှဲထားကွောငျး ပွီးခဲ့သညျ့အပတျက ကွညောခဲ့ပွီး အမရေိက Federal Reserve မှ အတိုးနှုနျးကို သုညဂဏနျးနီးပါးအထိလြှော့ခကြာ တဈကမ်ဘာလုံး၌ ဒျေါလာထောကျပံ့မှုမြား ခိုငျမာမှုရှိစရေနျ အခွားသော ဗဟိုဘဏျမြားနဲ့လညျး ညှိနှိုငျးဆောငျရှကျမညျဟု ကွညောခဲ့ပါတယျ။ လာမယျ့ရကျသတ်တပတျအတှငျး၌လညျး G7 အဖှဲ့ဝငျနိုငျငံမြားအကွား စီးပှားရေးနဲ့ပတျသကျ၍ နောကျထပျညှိနှိုငျးမှုမြား ပွုလုပျရနျ မြှျောလငျ့ထားပွီး အဆိုပါနိုငျငံမြားရှိဘဏျမြားအနဖွေငျ့ လကျရှိအခွအေနဆေိုးကို မညျကဲ့သို့ကြျောဖွတျသှားမညျလဲဆိုသညျကို စောငျ့ကွညျ့ရတော့မညျလညျးဖွဈပါတယျ။
ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်အန္တရာယ်အတွက် G7 အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများရဲ့ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုများ။
ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် ကူးစက်မှုနှုန်းက ကမ္ဘာ့စီးပွားရေးအပေါ် သိသိသာသာရိုက်ခတ်လာခဲ့ပြီး အဆိုးရွားဆုံး ခံစားရသည့်နိုင်ငံက တရုတ်နိုင်ငံဖြစ်သော်လည်း လက်ရှိအချိန်၌ နိုင်ငံပေါင်းရာနဲ့ချီ ထိခိုက်လာခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။ ထိုကဲ့သို့ထိခိုက်သည့်နိုင်ငံများ၌ ကနေဒါ၊ ပြင်သစ်၊ ဂျာမနီ၊ အီတလီ၊ ဂျပန်၊ ဗြိတိန်နဲ့ အမေရိကန်နိုင်ငံတို့လည်း ပါဝင်နေပြီဖြစ်ပါတယ်။
ဘဏ်လုပ်ငန်းဆန်းစစ်လေ့လာသူများရဲ့အဆိုအရ နိုင်ငံအသီးသီးရှိဘဏ်များသည် ယခင်နဲ့မတူညီသည့် အခြေအနေအများစုနဲ့ ရင်ဆိုင်နေရပြီး ရှယ်ယာများမှတစ်ဆင့် အမြတ်အစွန်း (၁၀) ရာခိုင်နှုန်းကျော်သာ ရရှိလျက်ရှိနေပါတယ်။ ကနေဒါနိုင်ငံရှိ ဘဏ်များ၌ အမြတ်ငွေ (၁၃.၀၅) ရာခိုင်နှုန်း၊ အမေရိကန်နိုင်ငံ၌ အမြတ်ငွေ (၁၀.၉၉) ရာခိုင်နှုန်းသာရရှိနေပြီး ဂျာမနီနဲ့ဂျပန်နိုင်ငံတို့မှ ဘဏ်များမှာမူ G7 နိုင်ငံများအနက် အနည်းဆုံးအဖြစ် အမြတ်ငွေ (၂.၁၃) ရာခိုင်နှုန်း၊ (၃.၉၂) ရာခိုင်နှုန်းစီသာရရှိထားကြောင်း သိရှိရပါတယ်။
ဂျာမနီ၊ အီတလီနဲ့ ပြင်သစ်နိုင်ငံတို့မှ ဘဏ်များသည် ချေးငွေနဲ့အပ်ငွေအချိုးအများဆုံးရှိပြီး လာမယ့်လပိုင်းအတွင်း ဘဏ်များအနေဖြင့် အားလပ်ရက်ရရှိနေသည့် Customer များကို အပေါင်စာချုပ်များနဲ့ အခြားချေးငွေများပြန်လည်ပေးဆပ်ရန်အတွက် ဖိအားပေးခံရနိုင်ပါတယ်။ အဆိုပါနိုင်ငံများမှ ဘဏ်တစ်ခုချင်းစီရဲ့ ချေးငွေနဲ့အပ်ငွေအချိုးနှုန်းက (၂၀၁၈) ခုနှစ်၌ (၁၁၀.၅၆) ရာခိုင်နှုန်း၊ (၁၀၅.၇၆) ရာခိုင်နှုန်းနဲ့ (၁၀၄.၁၁) ရာခိုင်နှုန်းအထိရှိခဲ့ပါတယ်။ အီတလီနိုင်ငံမှ အကြီးမားဆုံးဘဏ် (၂) ခုရဲ့ ချေးငွေနဲ့အပ်ငွေအချိုးနှုန်းက (၁၂၀) ရာခိုင်နှုန်းနဲ့အထက်ရှိပြီး ပြင်သစ်နိုင်ငံမှ အကြီးမားဆုံးဘဏ် (၂) ခုရဲ့ ချေးငွေနဲ့အပ်ငွေအချိုးနှုန်းက (၁၁၀) ရာခိုင်နှုန်းနဲ့အထက်ရှိကြောင်းလည်းသိရှိရပါတယ်။
ဂျာမနီနိုင်ငံရှိ အကြီးမားဆုံးဘဏ် (၃) ခုရဲ့ ချေးငွေနဲ့အပ်ငွေအချိုးနှုန်းမှာမူ (၁၀၀) ရာခိုင်နှုန်းကို မကျော်လွန်ဘဲ ထိုကဲ့သို့ဖြစ်ရသည့်အကြောင်းရင်းမှာလည်း နိုင်ငံအတွင်းရှိ ကျေးလက်နဲ့စိုက်ပျိုးရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဘဏ်ဖြစ်သည့် Landwirtschaftlich ကဲ့သို့သော အသေးစားဘဏ်များ၌ ချေးငွေနဲ့အပ်ငွေအချိုးနှုန်းက မြင့်မားနေခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။
Microeconomic အဆင့်၌ ကမ္ဘာ့ဘဏ်နဲ့ဗဟိုဘဏ်များအနေဖြင့် ကမ္ဘာ့စီးပွားရေးကို ထောက်ပံ့ရန် အစီအစဉ်များဆွဲထားကြောင်း ပြီးခဲ့သည့်အပတ်က ကြေညာခဲ့ပြီး အမေရိက Federal Reserve မှ အတိုးနှုန်းကို သုညဂဏန်းနီးပါးအထိလျှော့ချကာ တစ်ကမ္ဘာလုံး၌ ဒေါ်လာထောက်ပံ့မှုများ ခိုင်မာမှုရှိစေရန် အခြားသော ဗဟိုဘဏ်များနဲ့လည်း ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်မည်ဟု ကြေညာခဲ့ပါတယ်။ လာမယ့်ရက်သတ္တပတ်အတွင်း၌လည်း G7 အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများအကြား စီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်၍ နောက်ထပ်ညှိနှိုင်းမှုများ ပြုလုပ်ရန် မျှော်လင့်ထားပြီး အဆိုပါနိုင်ငံများရှိဘဏ်များအနေဖြင့် လက်ရှိအခြေအနေဆိုးကို မည်ကဲ့သို့ကျော်ဖြတ်သွားမည်လဲဆိုသည်ကို စောင့်ကြည့်ရတော့မည်လည်းဖြစ်ပါတယ်။
Previous Boomers ??? Gen Z ??????? ????????????? TikTok ??? ??????????? ???????????????
Next ??????????????????????????????? G7 ???????????????????????????????????????????